तपाईं सजिलै आफ्नो घर मा शरीर डिटोक्सिफिकेशनका लागि घरेलु उपचारहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ जुन शरीर डिटोक्सिफिकेशनका लागि उपयुक्त हुन्छ। यस पोष्टमा शरीर डिटोक्सिफिकेशनका लागि तपाईले प्रयोग गर्न सक्ने बिभिन्न उपायहरुको हामीले छलफल गरेका छौं ।यस्तो प्रकारको ज्ञानको लागि हामीलाई अनुसरण गर्नुहोस्।कुनै पनि प्रकारको डिटोक्सिफिकेशन उत्पादनको लागि तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।हामी मुख्य रूपमा यो व्यक्तिगत वेबसाइट को माध्यम बाट MLM, व्यवसाय, स्वास्थ्य र अनलाइन कमाउने सल्लाहहरू प्रदान गर्दछौं।
यी सबै घरेलु उपचारहरूका लागि केवल शुद्ध पानी प्रयोग गर्नु किराना स्टोरमा शुद्ध पानी खरीद गर्न सक्नुहुनेछ वा यदि तपाईंको घरमा पानी शुद्धीकरण प्रणाली छ भने तपाईंको ट्यापबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग पानी शुद्धीकरण प्रणाली छैन भने, तपाईंले आफ्नो घरको लागि एउटा लिने बारे विचार गर्नुपर्छ। यसले पानीबाट प्राप्त हुने केही अशुद्धीहरूबाट तपाईंको शरीरलाई स्वतन्त्र राख्न मद्दत गर्दछ।
Here are some of natural tips for body detoxification:-
शरीर डिटॉक्सिफायर १: कागती मिर्च सफा गर्न
Body Detoxifier 1: Lemon Pepper Cleanser
दुबै निम्बू र काली मिर्च डिटॉक्सिफायर रूपमा शरीरमा राम्रोसँग काम गर्दछ। कागती मिर्च क्लीन्जर एक सब भन्दा सजिलो र प्रभावकारी डिटॉक्सिफायर हो।
8 ounces (2,4 dl) of water
2 teaspoons (5 ml) of lemon zest
½ teaspoon (3 g) of black pepper
पानी र अन्य सामग्रीहरू मिलाउनुहोस् र यसलाई पिउनुहोस्। समाधान समाधान- पिइसकेपछि, दुई औंस (२,4 dl) गिलास पानी पिउनुहोस्। यसले तपाईंको प्रणालीमा फ्लश गर्न मद्दत गर्दछ। कागती काली मिर्च क्लीन्सर कोलन र सम्पूर्ण पाचन प्रणालीको लागि राम्रो छ।
सबै भन्दा राम्रो परिणामको लागि, ताजा भूमि कालो मिर्च र एक ताजा कागतीको zest प्रयोग गर्नुहोस्।
वैकल्पिक प्रयोग: तपाईं कालो मिर्च हटाउन सक्नुहुन्छ र एक चम्मच ताजा कागती जुसो मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ।
शारीरिक डिटॉक्सिफायर २: इटालियन बडी डिटोक्सिफायर
Body Detoxifier 2: Italian Body Detoxifier
1 teaspoon (5 ml) of flax seed oil
1 teaspoon (6 g) of basil
1 teaspoon (6 g) of oregano
½ teaspoon (3 g) of garlic
पानीसँग सबै सामग्रीहरू मिलाउनुहोस् र यसलाई पिउनुहोस्। पिइसकेपछि, समाधानको लागि पाँच मिनेट प्रतिक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि दुई थप गिलास पानी पिउनुहोस्। यसले सम्पूर्ण शरीरको लागि एक डिटोक्सिफायरको रूपमा काम गर्दछ र दुवै पाचन प्रणालीसँगसँगै सर्कुलेटरी प्रणालीको लागि पनि राम्रो छ।
उत्तम परिणामहरूका लागि ताजा लसुन प्रयोग गर्नुहोस्।
वैकल्पिक प्रयोग: तपाईं तुलसीको लागि रोज्मेरी प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
शरीर डिटॉक्सिफायर:3 बेरी डिटोक्स
Body Detoxifier 3: Berry Detox
6 ounces (1,8 dl) of water
2 ounces (0,6 dl) of pure acai berry juice
½ cup (115 g) blueberries
Fresh ताजा स्ट्रबेरी
ब्लेन्डरमा सबै सामग्रीहरू राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई मिलाउनुहोस्। तिनीहरूलाई पिउनुहोस् र शुद्ध पानीको एक औंस गिलासको साथ समाधानको अनुसरण गर्नुहोस्। यो एक डिटोक्सिफायर हो जुन एन्टिऑक्सिडन्टहरू र प्युरिफायरहरूसँग लोड हुन्छ।
उत्तम परिणामहरूको लागि, केवल ताजा सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
वैकल्पिक प्रयोग: प्रतिस्थापन blue स्ट्रबेरीको लागि ब्लूबेरीको कप।
शरीर डिटॉक्सिफायर:: ट्रपिकल डेटोक्स
Body Detoxifier 4: Tropical Detox
1 cup (2,4 dl) unsweetened, plain yogurt
½ cup (1,2 dl) pure orange juice
½ cup (1,2 dl) pure pineapple juice
ब्लेन्डरमा सबै सामग्री राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई मिक्स गर्नुहोस्। यो एक परम्परागत पेय भन्दा एक हिला जस्तै हुनेछ तर पाचन पथ सफा गर्न साथै आवश्यक पोषक प्रदान गर्न राम्रोसँग काम गर्दछ। यसले शरीरको अन्य डिटोक्सिफायरहरू भन्दा ढिलो काम गर्दछ तर कोलोनको लागि साथ साथै मुटु र प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि स्वस्थ हुन्छ।
उत्तम परिणामहरूको लागि, केवल ताजा सामग्री र शुद्ध जुस प्रयोग गर्नुहोस्।
वैकल्पिक: तपाईं १ कप (२,4 dl) सुन्तलाको रसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसको सट्टामा अनानासको रस र सुन्तलाको जौंको आधा र आधाको सट्टा।
शरीर डिटॉक्सिफायर:5 शुद्ध सफा
Body Detoxifier 5: Energizing Cleanse
1 teaspoon (6 g) of maca root
1 teaspoon (6 g) of ginseng
1 teaspoon (6 g) of acai powder
तपाईंले कोसा र मोर्टार प्रयोग गर्नुपर्दछ, खास गरी यदि तिनीहरू ताजा छन् भने। तपाईं तरल जिन्से्ग खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि तपाईं क्याप्सूल खरीद गर्न उत्तम हुन्छ। सुख्खा तत्त्वहरूलाई पीठो पार्नुहोस्, तिनीहरूलाई एक्लाई पाउडरसँग मिसाउनुहोस् र त्यसपछि तिनीहरूलाई पानीमा थप्नुहोस्। मिश्रण पिउनुहोस् र त्यसपछि अर्को गिलास पानी पिउनुहोस्।
यसले मात्र तपाईंलाई शक्ति प्रदान गर्दैन, तर तपाईंको पाचन र रक्ताभिसरण प्रणाली डिटॉक्सिफाइ गर्ने कार्य गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो शरीरलाई शक्ति दिनको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो काम गर्दछ।
तपाईं कुनै पनि स्वास्थ्य खाद्य स्टोर वा पनि अनलाइन पूरक खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि ती शुद्ध पूरकहरू हुन् र केमिकल मात्र पुन: उत्पादन गर्दैन। जिन्से(ginseng, )प्राय: "ऊर्जा पेयहरू" पसलहरूमा उपलब्ध हुन्छन् - कि बेवास्ता गर्नुहोस् र वास्तविक उत्पाद पाउनुहोस्।
शरीर डिटॉक्सिफायर:6 Colon Cleanse Diet
Body Detoxifier 6: Colon Cleanse Diet
1 teaspoon (6 g) of FRESH ginger
1 teaspoon (5 ml) of grape seed oil
यो बडि डिटोक्सिफायर हो जुन बृहत्तर क्लोन्जरको रूपमा राम्रोसँग काम गर्दछ। पानीमा थप्नु अघि सामग्रीहरू सँगै थप्नुहोस्। अदरक पिसाउन तपाईंले मोर्टार र मूसल प्रयोग गर्नु पर्छ यदि तपाईंसँग फूड प्रोसेसर छैन भने। तपाईं यो सफाको लागि ताजा अदुवा मात्र प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। हरियो चियाको प्याकेज खोल्नुहोस् र यसलाई मिक्समा फाल्नुहोस्।
सबै कुरा पानीसँग मिलाउनुहोस् र त्यसपछि पिउनुहोस्। दुई गिलास पानीको साथ यसलाई अनुसरण गर्नुहोस्। यो एक राम्रो वजन घटाउने डिटोक्सिफायर हो जुन तपाईं सुपरमार्केटमा खरीद गर्नुभएका उत्पादनहरूबाट सही बनाउन सक्नुहुन्छ।
उत्तम परिणामहरूको लागि, केवल शुद्ध ताजा सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
वैकल्पिक प्रयोग: हरियो चिया क्याप्सुल प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई मोर्टार र मूसलको साथ ग्रिड गर्नुहोस्।
शरीर डिटॉक्सिफायर:: दालचिनी मसला
Body Detoxifier 7: Cinnamon Spice
1 cup (2,4 dl) of brewed green tea
½ teaspoon (3 g) of cinnamon
तपाईले हरियो चिया बनाइसकेपछि दालचीनी र महलाई मिश्रणमा थप्नुहोस् र यसलाई तातो पार्नुहोस्। यो रमाईलो स्वाद लिने पेय हो र यसले तपाईंलाई आराम मात्र गर्दैन, तपाईंको शरीरलाई पनि सफा पार्छ र तपाईंको मुटुलाई मद्दत गर्दछ।
उत्तम परिणामहरूका लागि ताजा मैदामा दालचिनी प्रयोग गर्नुहोस्।
शरीर डिटॉक्सिफायर:8 Kidney Cleansing
Body Detoxifier 8: Kidney Cleansing
½ cup (1,2 dl) pure cranberry juice
¼ cup (0,6 dl) pure acai juice
3 teaspoons (15 ml) orange juice
सामग्रीहरू सँगै मिक्स गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई पानीमा थप्नुहोस्। यसलाई पिउनुहोस् र त्यसपछि थप दुई 8 औंस (२,4 dl) गिलास पानी पिउनुहोस्। यसले तपाईंको मूत्र पथलाई सफा गर्न र मूत्र पथ संक्रमणलाई खाली गर्न मद्दत गर्दछ।
उत्तम परिणामहरूका लागि केवल शुद्ध सामग्री र १०० प्रतिशत शुद्ध सुन्तलाको रस प्रयोग गर्नुहोस्।
शरीर डिटॉक्सिफायर:9 लैभेंडर सफा
Body Detoxifier 9: Lavender Cleansing
1 teaspoon (5 ml) of pure lavender oil
तेलहरू पानीसँग मिसाउनुहोस् र पिउनुहोस्। मिश्रण फ्लश पछि अर्को गिलास पानी उपभोग गर्नुहोस्। यो कुल शरीर सफा हो र तपाईंको शरीरको सबै भागहरू डिटोक्सिफाई गर्दछ।
चेतावनी: शुद्ध लैभेंडर तेल मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। आवश्यक तेल, केहि अपवाद बाहेक, घूसको लागि बनिएको हुँदैन। लैभेंडर तेल एक अपवाद हो, तर यो शुद्ध हुनुपर्दछ।
Warning: Use only pure Lavender oil. Essential oils, with the exception ofafew, are not made for ingestion. Lavender oil is an exception, but it must be pure.
शरीर डिटॉक्सिफायर १०: ट्रपिकल डिल्ट
Body Detoxifier 10: Tropical Delight
½ cup (1,2 dl) orange juice
¼ cup (0,6 dl) acai juice
2 teaspoons (10 ml) of lemon juice (pure)
ब्लेन्डरमा सबै सामग्रीहरू मिक्स गर्नुहोस्। ब्लेन्डर भर्न पर्याप्त आइस क्युब्स थप्नुहोस् र त्यसपछि प्युरिफायर। औषधि औषधि औषधि को सम्पूर्ण पिनुहोस्। यो शरीरको लागि एक डिटोक्सिफायर हो र यदि तपाईं तौल घटाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने खानाको रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ।
शरीर डिटॉक्सिफायर ११: भेजी क्लीन्जर
Body Detoxifier 11: Veggie Cleanser
1 teaspoon (5 ml) of omega fish oil
1 teaspoon (5 ml) flax seed oil
तपाईंलाई यस विधिका लागि फूड प्रोसेसर आवश्यक छ, यद्यपि यसले निश्चित रूपमा प्रणाली खाली गर्दछ र पाचन प्रणालीमा आश्चर्य काम गर्दछ। तपाईंले तरकारीहरू पल्भराइज गर्नुपर्दछ कि ती च्याउ जस्तै हुन्छन् र त्यसपछि बरफको टुक्रा र तेल मिक्समा थप्नुहोस्। राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र त्यसपछि सम्पूर्ण खपत गर्नुहोस्। एक गिलास शुद्ध पानीको साथ अनुसरण गर्नुहोस्।
यो एक सुरक्षित र स्वस्थ पेय हो जुन स्वस्थ आधारमा खान सकिन्छ। यो तपाइँ भोजन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो खाना को विकल्पको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
शरीर डिटॉक्सिफायर १२: भिटामिन क्लीन्जर
Body Detoxifier 12: Vitamin Cleanser
1 cup green tea - hot
क्यापसुलहरू मोर्टारमा हाल्नुहोस् र तातो चियामा तिनीहरूलाई थप्नुहोस् ता कि तिनीहरू विघटित हुनेछन्। त्यसपछि मिक्सनमा दालचिनी थप्नुहोस्। यसलाई पिउनुहोस्। यसले तपाईंको शरीरमा भिटामिन र पोषकहरू थप्नेछ जुन तपाईं अभाव हुन सक्छ। यो तनाव, डिप्रेसन र मुटुको लागि स्वस्थ हटाउनका लागि राम्रो छ।
यी शरीर डिटोक्सिफायरहरूको लागि सबै सामग्रीहरू तपाईंको स्थानीय किराना स्टोर वा स्वास्थ्य खाद्य स्टोरमा पाउन सकिन्छ। तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईं शुद्ध सामग्रीहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ तर सिन्थेटिक्सबाट बनेको होईन। तपाईं मोर्टार र पेस्टल अनलाइन वा केही औषधि पसलहरू र स्वास्थ्य खाद्य स्टोरहरूमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।कुनै पनि प्रकारको डिटोक्सिफिकेशन उत्पादनको लागि तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
The information provided by https://www.teyungkumar.com.np/ (“Company”, “we”, “our”, “us”) on https://www.teyungkumar.com.np/ (the “Site”) is for general informational purposes only. All information on the Site is provided in good faith, however we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of any information on the Site.
DXN product Health knowledge.